Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO setịpụrụ iri ngo 34 Mba maka Nri Anyasị, Georgia Style
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na nzuzo nzuzo nke World Tourism Organisation, nri abalị e mere iji nye iri ngo mba 34 ka agbakwunyere na mmemme UNWTO Election ụnyaahụ. Onye isi ama ama nke Spanish bụ Dani García ga-akwadebe nri abalị iri na nkwari akụ anọ dị na Madrid na Mọnde nke Mịnịsta Ofesi nke Georgia kwụrụ ụgwọ na mbuso agha megide Bahrain.
Ndị ndu njem nleta maara ihe mere na Madrid ụnyaahụ nwere oge siri ike nghọta. The Republic of Georgia na nkwado na United Nations World Tourism Organisation na-eme atụmatụ na-emeghe agha megide Alaeze nke Bahrain na ya 113th Executive Council nzukọ na Mọnde.
N'akwụkwọ ozi UNWTO dị n'aka, HE Mr. David Zalkaliani, Mịnịsta nke okwu Ofesi nke Republic of Georgia ga-abụ onye ọbịa maka ndị isi nke ndị nnọchi anya si mba 34 na-eme ntuli aka na ntuli aka Secretary General nke Tuesday. Onye ode akwukwo ukwu UNWTO nke ugbu a sitere na Georgia wee jiri ike ya na UNWTO Secretariat mee atụmatụ na ịkwado mmegharị iwu a na-akwadoghị.
Bahrain nwere naanị onye na-azọ ọkwa na ntuli aka na-abịa. Ọ jidere ya na ụnyaahụ wee kpebie ịghara ịga oriri abalị UN nke ezubere iji kwalite onye iro ya, odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO ugbu a.
Indị ọbịa a kpọrọ na nri anyasị bụ ndị isi ndị nnọchi anya maka mba ndị otu UNWTO Executive Council.
Tupu nri abalị, Nna ya ukwu, Eze Spain ga-ekele otu ndị nnọchiteanya ahụ na El Pardo Obí.
Kedu mba ga-ewere ma ọ bụ ka mma "rie" ngarị?
Georgia na-elekwasị anya ndị nnọchi anya na-anọchite anya mba 34 na-eso nri nri abalị iri:
Bahrain (anaghị abịa)
N'ihi COVID-19 na oké mmiri ozuzo na Madrid, naanị ndị ozi 1 ma ọ bụ 2 na-atụ anya ịbịa n'onwe ha. Ndị mba ndị ọzọ ga-aga Proxy ma ọ bụ ndị ọrụ Embassy nke dabeere na Madrid ga-anọchite anya ha.
Na Jenụwarị 2017, emume UNWTO Sustainable Tourism afọ.
Ndị niile edenyere aha ha na-asọ mpi maka ntuli aka nke Secretary General na 2017 nọ na Madrid na-agbagharị ma na-aga mmemme mmeghe FITUR.
Dika onye ọbịa ugwu nkwanye ugwu Georgias praịm minista gosipụtara ma kwuo okwu mbu ya. O lekwasịrị anya na njem nleta na-adigide, mana ihe niile gbasara ịkwalite onye nyocha Georgias Zurab Pololikashvili maka odeakwụkwọ ukwu. Ndị na-asọ mpi na FITUR na-ege ntị jidere na mberede.
N’ọnwa Juun nke 2017 n’abalị tupu ntuli aka maka onye isi UNWTO, ,lọ ọrụ Emọjia nke Georgia na Madrid zụtara tiketi maka ndị nnọchi anya ịga egwuregwu bọọlụ erere, iji nwee oge dị mma ikiri egwuregwu ahụ na onye otu Georgia bụ Zurab Pololikashvili. Na nyocha, eTurboNews Ndị na-agụ akwụkwọ tozuru oke egwuregwu a ka emebere ndị nnọchi anya.
ATQ News jụrụ na otu isiokwu: Real Madrid ọ họọrọ UNWTO Tourism SG ọzọ?
Na Septemba Zurab kpọrọ nnọkọ nke 112 nke nzukọ Executive Council na obodo ya Georgia. Ego ole bụ aghụghọ nke nzukọ UNWTO Executive Council na Georgia na 112?
FITUR bụ ihe mere kansụl ji gbasoro ọchịchọ Zurab ịhapụ ọtụtụ ọnwa na windo oge maka ndị ga-edebanye aha na ịsọ mpi na ntuli aka izu na-abịa maka SG.
FITUR bụkwa ihe kpatara ntuli aka nke 2022 ka agafee na izu na-esote Tuesday kama Mee 2021.
Naanị ụbọchị ole na ole gachara mgbe Nzukọ Nzukọ Ndị Isi nke Georgia gasịrị, 7 Ndị Ntuli Aka tinyere akwụkwọ maka ịsọ mpi, naanị otu onye ka a nabatara. Zurab ”sari ekweghị ndị mmadụ 6 mee ihe ruru ya n’ihi akụkụ na-efu na akwụkwọ ndị achọrọ.
Ka ọ dị ugbu a, FITUR kagburu. N’ọnwa Nọvemba UNWTO ndị isi Council Council nwere ohere ime ihe dị mma, mana ha emeghị.
Ihe ziri ezi ga abụrụla iji nye oge dị mma maka ndị na-aga ịdebanye aha. Ihe ziri ezi gaara abụ ịlaghachi ụbọchị mbụ ịme ntuli aka iji nye ndị ga-asọ mpi ohere ịme mkpọsa.
Ọbụghị naanị na iwu mkpọchi COVID-19 siri ike karị, mana ajọ ifufe mmiri siri ike mere ka ọ bụrụ ihe siri ike karịa maka ndị ozi iri atọ na ise nke njem nlegharị anya na-anọchite anya obodo ndị isi Executive ka ha gaa Madrid n’izu ọzọ. Mba dị ugbu a na-adabere na ndị nnọchi anya obodo ha na Madrid ma ọ bụ na Proxies ịga nnọkọ ntuli aka ahụ, ma ọ bụ na ha agaghị aga ma ọlị. Ọtụtụ mba enweghị ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo na Madrid.
The "Decdị Mma nke Mgbasa Ozi Nhọpụta UNWTO ” nke World Tourism Network bidoro nke onye bu ndi ode akwukwo UNWTO abuo tinyere ndi otutu ndi ndu nke njem site na ihe kariri mba 100.
Eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị Minister of Tourism na-atụ vootu nwalere COVID-19 ekwenyeghi Zurab Pololikashvili ịkagbu nzukọ izu na-abịa. Anabataghị votu eletrọniki.
Ndị Minista Ofesi na-achịkwa ndị nnọchi anya Ọ bụghị ndị njem njem. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-aga nzukọ ọgbakọ ndị isi n’izu na-abịa, ọ gaghị abụ ọtụtụ ndị ozi njem nleta. Ndị nnọchi anya imebi ndị ọrụ nke ndị ọrụ nnọchite anya mba nwere ike ịbịa. Ndị Minista Ofesi na-achịkwa ndị nnọchi anya mba ọzọ.
Egwuregwu ikpeazụ nke Zurab na-ekpughere ugbu a. N'ịpụta dị ka ihe ịtụnanya, mana o yikarịrị ka akpachapụrụ anya mee nke ọma, onye ozi mba ofesi Georgia na-abanye n'ụgbọelu ịnabata ndị ọbịa nnabata nri abalị n'abalị ahụ tupu ntuli aka - ụdị Georgia.
Ezigbo nri, ezigbo mmanya ka emebere iji mee ka ndị nnọchi anya gaa votu maka Georgia. Ọ na-ahapụ onye naanị ya na-asọmpi sitere na Bahrain bụ Onye nwe obodo Shaikha Mai Al Khalifa n'akụkụ akụkụ.
Emebi Usoro UN nke ụkpụrụ omume
Dabere na onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO bụ Dr. Taleb Rifai, ihe na-eme na Madrid megidere usoro iwu ọ bụla amaara. Ọ gwara eTurboNews"You pụghị iwebata ihe gọọmentị na Executive Council burukwa nke ezubere ịbara ma kwalite naanị otu nwa akwukwo."
Walter Mzembi onye bụbu onye ndoro-ndoro ochichi kwuru, sị: "Okpukpe megidere ụkpụrụ omume na-adịghị adị."